बिदाले नचिनेको एउटा विद्यालय ! – YesKathmandu.com
बिदाले नचिनेको एउटा विद्यालय !
बलेवा । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीले भित्तेपात्रोमा रातो मसीले लेखिएको दिन कुरिरहेका हुन्छन् । घरमा साँचिएका काम गर्न र साथीभाइसँग रमाइलो गर्न भित्तेपात्रोमा रातो मसीले लेखिएको मितिले शिक्षक विद्यार्थीलाई सहयोग गर्छ । आफन्त भेट्न, घुम्न र अरु व्यक्तिगत कामको लागि सघाउने रातो मसिले लेखिएको भित्तेपात्रोको मितिले बागलुङको एक विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीलाई भने चिनेको छैन ।
विद्यालयमा हुने नियमित पठनपाठनका कारण शिक्षकले आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक बिदा बस्न पाउँदैनन् । विद्यालयले बनाएको नियममा शिक्षक विद्यार्थी भने खुशी छन् । “बिदा हुँदा विद्यार्थी खोला, भिर पहरा तथा रुखमा खेल्न जाने र दुर्घटना हुने गरेका उदाहरण हामीसँग छन्” प्रअ ढकालले भने “हाम्रोमा नियमित पठनपाठन हुँदा त्यो समस्या छैन ।”
विद्यालयले वर्षे बिदाका १५ दिन र अन्य सार्वजनिक बिदाको समयमा पठनपाठन गराउनका लागि शिक्षकसँग सहयोग माग्ने गरेको छ । वर्षे बिदाको एक महीना भने अतिरिक्त तलबको व्यवस्था गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । “हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला विद्यालयले बिदा आफैँ दिन्छ, साथीहरुको बीचमा मिलेर कक्षा चलाउने गरेका छौँ” शिक्षक भीमबहादुर विकले भने “अरु बेला पठनपाठनमा सहभागी हुनु आफ्नो कर्तव्य सम्झेका छौँ ।” विद्यालयले बिदाको दिन पढाउने शिक्षकको इच्छाशक्तिको आधारमा बीमा गरिदिने सहुलियत पनि दिएको विकले बताए ।
कक्षा शिक्षकलाई अभिभावक सम्पर्क खर्चका लागि मासिक रु ५०० खर्च विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विद्यार्थीले बहानाबाजी गरेर घरबाट विद्यालय हिँड्ने र विद्यालयमा उपस्थित नभई खेल्न गएको खण्डमा अभिभावकसँग सम्पर्क गर्दा जानकारी लिन सजिलो हुने गरेको उनले बताए । विद्यालयमा विद्यार्थीलाई केही समस्या आइपरेमा पनि कक्षा शिक्षकमार्फत अभिभावकलाई सम्पर्क गर्ने गरिएको छ ।